Umphumela obalulekile wamanzi ekukhuleni kwezitshalo: 1. Amanzi ayingxenye yesitshalo; 2. Amandla okulondoloza isimo semvelo sezitshalo: Amanzi abamba iqhaza ku-photosynthesis, ukuphefumula, ukuhlanganiswa kanye nokubola kwezinto eziphilayo; 3. Amanzi yiwona kuphela wezitshalo ...
Kusukela kuqale lo nyaka, amazwe amaningi athengisa imikhiqizo yezolimo emhlabeni wonke abhekene nenkinga yesomiso, okube nomthelela omkhulu emnothweni womhlaba. Isibonelo, i-United States neBrazil babhekane nesomiso esibi. Ukolweni, ummbila ...
Ukuchelela nge-Sprinkler, okungukuthi, ukunisela ngenkasa, kuyindlela ethuthukile yokunisela esebenzisa isethi yemishini ekhethekile yokufafaza amanzi ngaphansi kwengcindezi emoyeni, kwakheke amaconsi amancane, njengemvula, afuthwe ngokulinganayo emhlabeni olinyiwe ...
I-1.Uma itheyiphu yokunisela ngenkasa isetshenziswa ngaphansi kwefilimu yezolimo, ngenxa yokukhanya kwelanga, amanzi angaphezulu azohwamuka, bese ehlangana abe ngamaconsi amanzi amancane kwifilimu yezolimo. La mathonsi amanzi amancane azokwakha ilensi. Ngaphansi kwebanga elifanele nelanga ...
Ibhondi Yobungani, Ibhuloho Lokuhweba
Ngaphansi kwesimo esibi segciwane lomqhele elisha lomhlaba, i-129th Canton Fair yaqala ngokusemthethweni emafini ngo-9 ekuseni ngo-Ephreli 15, 2021. ICanton Fair yamanje izobanjwa kusukela ngo-Ephreli 15 kuya ku-24, kanti umbukiso uzoba las .. .